Dawladda hoose ee Garowe oo maantay xirtay dhammaan gawaarida adeega bulshada ee PL-yada. – Radio Daljir
Garowe, Oct 22 – Dawladda hoose ee degmada Garowe ayaa maantay saldhiga dhexe ee Garowe ku xir-xirtay dhammaan gawaarida adeega bulshada ee ka shaqeeya xaafadaha magaalada Garowe ee looyaqaan PL-yada, waxaana tilaabadaan ay ka dambaysay arrimo maamulka degmadu ku tilmaameen amniga iyo shilalka oo batay oo awgeed.
Xog-hayaha dawladda hoose ee degmada Garowe Qaasim Maxamed Cabdi oo maantay xarunta dawladda hoose kula hadlay warfidiyeennada ka hawl-gala magaalada Garowe ayaa sheegay, in dhibaatooyinka ugu badan ee dadka shacabka ah kasoo gaara gawaarida adeega bulshada ay tahay, inay dhanka bidix ku leeyihiin albaabka intooda badani, taasina ay sababto waxyeelo badan oo ay la kulmaan qaybaha kale duwan ee bulshada isticmaasha gawaaridaasi.
“Ujeedada dhabta ah ee aan u xir-xirnay gawaaridaan waxay tahay in gawaaridaan badankooda ay darawalo ka yihiin dhalinyaro aad u da’yar, isla markaana ay jirto khayru-masuulnimo aad u daran oo shacabku kala kulmaan had iyo goorba, haddaba waxaan doonaynaa inaan arrimahaan kala shirno mulkiilayaasha gawaaridaan, si aan wax-iskula meel-dhigno” sidaasina waxaa yiri xog-hayaha dawladda hoose ee degmada Garowe Qaasim Maxamed Cabdi.
Qaar ka mida darawadala gaadiidka adeega dadwaynaha ee looyaqaan PL-yada ayaa booqasho ay noogu-yimaadeen Daljir xaruneeda Garowe ku cabbiray sida ay uga xunyihiin xannibaada lagu soo rogay adeega bulshada ay u hayeen, waxayna tilmaameen waxyaabaha lagu soo eedeeyay inaysan bodonkoodu waxba ka ogayn ama ku lug lahayn.
Maahan markii ugu horaysay oo dawladda hoose ee degmada Garowe xannibaad ku soo rogto gawaarida adeega bulshada ee PL-da, waxaana arrintaan ay saamayn-weyn ku yeelataa xilliyada ay dhacdo, isku socodka bulshada ee xaafadaha magaalada Garowe.